मुना हत्या प्रकरण : पूर्व सचिव अर्जुन कार्की चिच्याएर रोएपछि सांसद कोमल वलीले जे देखिन् ...
पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीकी पत्नी मुनाको हत्या घटनाको पहिलो जानकारी सांसद कोमल वलीले प्रहरीलाई दिएकी थिइन् ।
कार्कीकी छिमेकी वलीको घर घटनास्थल नजिकै छ । नजिकै रहेको घरमा कार्की रोएर चिच्चाइरहेको देखेपछि घटनाबारे थाहा पाएर प्रहरीलाई जानकारी गराएको सांसद वलीले बताइन् ।
सांसद वलीले हत्या घटनाबारे कसरी थाहा पाइन् ? घटनास्थलको दृश्य कस्तो देखियो ? सांसद वलीसँग गरिएको कुराकानीको शारांश उनकै शब्दमा –
सोमवार बिहान जाडो भएकाले म आफ्नो घरको छतमा भाउजुसँगै खाना खाँदै थिएँ । मेरो घरबाट उहाँ (अर्जुन कार्की) को घर नजिकै पर्छ । छतको बरन्डाबाट त प्रत्यक्षरुपमा कुराकानी गर्न मिल्ने खालको छ ।
अर्जुन सरले बोलाएको भाउजुले सुन्नुभएछ । त्यसपछि भाउजुले हेर्नुस् त मैया अर्जुन कार्कीको घरबाट बोलाएको जस्तो छ, खै के–के भन्दै हुनुहुन्छ, रुँदै पनि हुनुहुन्छ, चिच्चाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभयो ।
त्यसपछि हामीले बाहिर छतमा आएर उहाँको घरतर्फ हेर्‍यौं । त्यसबखतमा उहाँ छाती पिटीपिटी रुँदै हुनुहुन्थ्यो । हामीले माथिबाटै ‘के भयो अर्जुन सर’ भनेर सोध्यौं ।
उहाँ ‘म त बर्बाद भए, म लुटिए, मेरो मुना, मेरो बाबालाई मारिदियो’ भनेर चिच्चाइरहनुभएको थियो ।
‘कसले मारिदियो सर ?’ हामीले फेरि सोध्यौं । ‘काम गर्ने केटा’ भन्दै चिच्चाउँदै रुँदै हुनुहुन्थ्यो ।
मेरो दाइ र म दौडिएर उहाँको घरतर्फ लाग्यौं । घरको छत नजिकै–नजिकै भएपनि सडक भने घुमेर जानुपर्ने भएकाले ३–४ मिनेट जति लाग्यो ।
जाँदाजाँदै अन्य छिमेकीलाई पनि अर्जुन सरको घरमा भएको घटनाका बारेमा जानकारी दियौं । अन्य छिमेकीहरू पनि आउनुभयो ।
घर बाहिरै उहाँ (अर्जुन कार्की) एक्लै रोइरहनुभएको थियो । अनि हामी भित्र गयौं । लबिबाट माथि जाने भर्‍याङमा केटा (विजय चौधरी) भूइँमा लडिराखेको थियो । डोरी चुँडिएको थियो । उहाँ (अर्जुन कार्की) को ‘मिसेस’ (मुना अधिकारी कार्की) भान्साको ढोकातर्फ टाउको पारेर रक्ताम्य भूइँमा लडिराख्नुभएको थियो ।
त्यसबेलासम्म मेरो दाइले सानेपाको प्रहरीलाई खबर गर्नुभयो । मैले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई खबर गरें । मैले खबर गर्दा साढे ११ बजेको समयको कुरा हुनुपर्छ ।
केही समय अगाडि अर्जुन सरले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग कुरा गर्नुभएको रैछ । त्यसैदिन ज्ञानेन्द्र सरकोे लेख पत्रिकामा आएको रैछ, त्यस विषयमा कुरा भएको मैले पछि थाहा पाएँ ।
त्यसपछि केही समयमा प्रहरी आइहाल्नुभयो । त्यसपछि मुनालाई प्रहरीले अस्पताल लैजानुभयो । अस्पताल गएपछि मुनाको निधन भएको खबर आयो ।
‘आक्रामक थिए विजय चौधरी’
कार्कीको घरमा काम गर्ने विजय चौधरी आक्रामक स्वभावको भएको वलीले लोकान्तरसँग भनिन् । ‘घरमा नानीबावुले त्यो केटा कति कराउँथ्यो । कुकुरहरू लगायत अन्यलाई अनायासैमा गाली गर्ने गरेको बेलाबेलामा भनिरहन्थे,’ वलीले भनिन् ।
ऋणीलाई राहत: चैतभित्र तिर्नुपर्ने साँवाब्याज असारमा बुझाए हुने, हर्जाना नलाग्ने